“Goolkii aan ka dhaliyay Juventus waa kii ugu fiicnaa xirfadeyda kubada cagta” – Cristiano Ronaldo – Gool FM
“Goolkii aan ka dhaliyay Juventus waa kii ugu fiicnaa xirfadeyda kubada cagta” – Cristiano Ronaldo
(Dubai) 04 Jan 2019. Laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in loo caleymo saaro ciyaaryahanka ugu fiican aduunka ee abaal marinta Globe Soccer 2018, kadib xaflad lagu qabtay Dubai.
Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaal marinta goolkii ugu fiicnaa 2018, kadib goolkii quruxda badnaa uu kaga dhaliyay kooxdiisa haatan ee Juventus tartanka Champions League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Hadaba Cristiano Ronaldo ayaa kadib markii uu ku guuleystay abaal marintan wuxuu ka hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Marka ugu horeysa, ciid wanaagsan qof walba, hada waxaan ku jirnaa sanad cusub”.
“Sanadka 2018 wuu dhamaaday wax walba uu yahay, haatan waxaa bilaawday sanad cusub ee ah 2019, waxaana kaga bilaawday talaabo fiican, kadib markii aan ku guuleystay abaal marintan, sababa la xiriira goolkan quruxda badan ee aan dhaliyay”.
“Kani waa goolkeygii ugu fiicnaa ee xirfadeyda kubada cagta, balse nasiib daro wuxuu ka dhashay kooxdeyda haatan ee Juventus, sidaasi darteed ma faraxsani”.
Tababare Mauricio Pochettino oo hadal farxad leh u sheegay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona